२९ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने राष्ट्रहरुको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं बैठक विहिबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । होटल शोल्टीमा शुरु भएको बैठकमा आज पहिलो दिन सदस्य राष्ट्रका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुनेछ ।
५ अर्बको रिभर्स रिपो आज, बैंकमा पर्याप्त तरलता छ ?
२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार ५ अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्दैछ । ७ दिनमा परिपक्व हुने गरी केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्न लागेको हो ।
नदी अतिक्रमण गरी तीनतले घर !
२९ कात्तिक, कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी बजार भएर बग्ने सनवोरा नदी जग्गा कब्जा गरी अवैधरूपमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
त्रिशूली–रसुवागढी सडकमा मुअाब्जा विवाद, स्थानीयद्वारा संघर्ष समिति गठन
२९ कात्तिक, नुवाकाेट । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रु–रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत नुवाकोटको पिपलटारदेखि ढुङ्गेका प्रभावित स्थानीयवासीहरूले मुआब्जा माग गर्दै सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
बन्दीपुर केबलकारकाे सेयर तनुहँवासीलार्इ
२९ कात्तिक, तनहुँ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माण शुरु गरिएको केबलकारको सेयर तनहुँवासीले खरिद गर्न पाउने भएका छन् ।
तीन महिनामा प्रभु बैंकको खुद नाफा करिब ६० करोड
१८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैयमासको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
ग्यालेक्सी ए नाइन एस ल्याउँदै सामसुङ, यी हुनेछन् फिचर्स
सामसुङले आफ्ना ग्यालेक्सी ए सिरिजको नयाँ फ्याब्लेट लञ्च गर्दैछ । अक्टोबर २४ बुधबार चीनमा एक विशेष कार्यक्रमबीच सामसुङले ग्यालेक्सी ए नाइन एस सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
६ कात्तिक, काठमाडौं । सन् २०१९ मा घुम्नलायक विश्वका उत्कृष्ट शहरहरुको सूचीमा काठमाडौं पाँचौ स्थानमा परेको छ । लोन्ली प्लानेटले निकालेको १० उत्कृष्ट शहरहरुको सूचीमा काठमाडौंले मेक्सिकोसिटी, सेनेगल, वाशिङ्गटन, क्रोयसिया र मोरक्कोलाई समेत पछि पारेको छ ।
दशैंपछि पोखरा खचाखच, होटलमा कोठा पाउनसमेत मुश्किल !
६ कात्तिक, पोखरा । पोखराका तालतलैया, गुफा, धार्मिकस्थल जहाँतही यतिखेर आन्तरिक पर्यटकको निकै चाप देखिएको छ । फेवातालमा डुङ्गा शयरदेखि सराङकोट, विश्वशान्ति स्तुपलगायतका स्थान पुगी सूर्योदयसहित हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न पर्यटक लालायित देखिन्छन् ।
बैंकमा तरलता अभावको संकेत, राष्ट्र बैंक भन्छ- सम्झाउछौं
आधा दर्जन बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्यो